Matory na Maty – Ampahany 1: “Toa Mihiaka Fahafatesana ny Zavatra Rehetra” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2016 17:09 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Ελληνικά, Français, русский, Deutsch, عربي
Fanokana-monina, fonja Old Dubbo. SARY: Corrie Barklimore (CC BY 2.0)
Ity no fizarana voalohany amin'ny “Matory na maty”, andiany ahitàna fizaràna enina novokarin'i Sarmad Al Jilane, mpikatroka, mikasika ireo zavatra niainany tany anatin'ny fonja Siriana.
Lavitra ny tontolo virtoaly manga iainantsika, mijery ny tenanao ianao dia mahita fa ianao irery no hany nilaozan'ireo fahaiza-mampifanaraka zavatra. Misinda miadana izy ireny, maneho hirifiry toy ny fahamarinana hitanao mazava tsara, avy anatiny sy ivelany. Fahamarinana iray mendrika ny anarany. Iray izay manjary lisitra misy ireo fihetsehampo sy ireo fomba fiteny, fa tsy fanoharana.
Saingy rehefa tafaverina amin'ny tontolo tena izy ianao ary any ivelan'ny hatsaran'ny teatra sy ny sehatra mahafinaritra ary ireo mpilalao, ka manokatra ny varavarana ao ambadiky ny sehatra, lasa mivadika ho nofo sy rà ny olona ary mihiaka an-drahafatesana ny zavatra rehetra. Manjavona ny ahiahy ary miaiky ny fisianao ianao na eo aza ny fihodinkodinan'ny tany eo amin'ny teboky ny andro farany, ary mazava aminao fa eto ianao, voageja ao ambadik'ireo rindrina naorin'ireo ray amandreninao, ary talohan'izy ireo, ny raibe sy renibenao, biriky isaky ny biriky.
In-telo nosamborin'izy ireo izaho sy ny raiko, saingy tsy ampy ho ahy izany mba “hianarana lesona” araka izay voalazan'ny Lehiben'ny Sampana Fiarovana, nanizingizina fa tsy ho zakako ny faninefany. Noporofoiny taminay ny fanjakazakany, na dia hatramin'ny famotehana ireo foto-kevitra tsotra indrindra anananay aza.
Tovolahy dimy, voatango avy eny an-jaridaina mahafinaritry ny revolisionanay nandritra ny hetsika iray tam-pilaminana. Ampy nandrendrika ny tanàna iray manontolo ho ao anatin'ny haizin'ny alina narahana hiakiaka “Allahu Akbar” izany. Nitsangana daholo ireo mpiray vodirindrina, afa-tsy ny ahy. Ary sambany no mba nangina, toa tsy nisy olona, rehefa tonga ny fotoana nilàna azy — na tsy niandrandra zavatra betsaka velively aza aho avy aminà tanàna iray feno zana-tsampan'ny fitondràna sy ireo mpitsikombakomba aminy.
Ny alina fahatelo. Lasa nangina ny zavatra rehetra taorian'ny nanapahana ny famatsiana herinaratra tamin'ny manodidina. Namakiako ny fahanginana ny hiakako “Allahu Akbar” imbetsaka avy eny an-tafontranoko. Reko ny akon'ny feoko namakivaky ny fahanginana. Minitra vitsy taorian'izay, nahatsiaro nahazo antoka ireo namana ka nanampy tosika ahy. Tsy irery aho. Betsaka namana tao, tena namana izay nanjohy ahy; niaraka namorona sary iray mahafinaritra izahay, izay nanaporofo ny zavatra nandrandraiko. Amin'izany fotoana izany, tsapanao hoe navelanao nivoaka ilay mpanao hatsaràna, saingy tsy raharahaina fotsiny izao.
Antso iray avy amin'ny raiko: “Mivonòna – hihaona ao amin'ny Sampana Fiarovana an'ny Tafika isika”. Tapitra ny antso.
Hitako fa tsy olana loatra ny hoe tantely firy litatra no ohaninao, tsy misy zavatra afaka hamerina ny feonao taorian'ny angoan-tenda tahaka izany, alohan'ny hahatongavanao eo aminà sampana iray mpiantoka fiarovana. Tonga teo aho. Mipetraka miaraka amin'ny ankamaroan'ireo lehilahiny ny Kolonely Ghassan, ny raiko ary ankehitriny izaho.
Manomboka miteny ny Kolonely Ghassan: “Aleo ho reko ianao miantsoantso ‘Allahu Akbar’, sa ampy fahasahiana tsara fotsiny ianao hanao an'io rehefa tsy tafaraka aminay?” Tsy niala teny amiko ireo masony, feno fankahalàna. “Ary dia sahy mijery ahy amin'ny maso ianao fa tsy ny gorodona no jerenao”
Izay nataoko tamin'io, tsy nataoko tamim-pahasahiana. 18 taona aho, nitsidika faninefany ny biraon'ilay sampana. Hadalàna angamba izany, fireharehana na fitroarana. Feno toky ery aho namaly: “Tsy niandrandra velively ny hahita anao manadino ny feoko aho hatramin'ny omaly. Ary tsy mihevitra ny hiato tsy hijery anao anaty maso, koa nahoana no ho androany?”
Io no fifampiresahana fohy indrindra mety tena nitondra fangirifiriana ho ahy taorian'izay— na teo aza izany, tsy nanenenako ilay izy. “Alefaso hitoka-monina izy, ary ento avereno mitoka-monina ihany koa ny rainy”.
“Ento avereno mitoka-monina ny rainy”. Izay fehezanteny masiso izay, izay mbola manaraka aty anaty oroko hatramin'izao ny fofona ratsiny. Lasa “soritraretina” mampijaly ahy ara-tsaina nandritry ny volana maro io.
Miampita mamakivaky ny tokontany aho. Ny birao voalohany dia ilay ametrahako ny fanànako. Miverina miampita ny tokontany indray ary mandeha ao amin'ny birao faharoa, izay eo am-pidirana ny lalantsara mankany amin'ireo efitrano fanokana-monina. Notadidiako tsara daholo ilay toerana alohan'ny hidirana ao. Toa toy ny malalaka kokoa ny efitrakely natao ho ahy tamin'ity indray mitoraka ity, tsy toy ireo efa nahazatra nomena ahy. Tsy maintsy mifampizara azy io aminà iray hafa mpiara-mifonja aho, ary afaka mipetraka avy hatrany tsy mila miandry ny anjarako toy ny mahazatra tsy maintsy nataoko.
Taorian'ireo minitra vitsy izay tsapa ho toy ny mandrakizay, niala ny efitrano ilay manampahefana, ary nampiasa ilay fitaovam-pifandraisana efa fantatry ny maro aho, tamin'ny fikapohana ny rindrina amin'ny totohondriko. Azoko lazaina fa “vao sambany ny azy”. Taorian'ny fisalasalàna naharitraritra ihany, namaly ahy izy. Tamin'ireo efitrano kely nifanila tamin'ny ahy, toa tsy nisy nanana lehilahy iray miavaka, efa nahazoazo taona toa ahy ary nantsoina hoe Ilay Mpitsabo. Tsy misy mampisongadina azy ny endriko ato anatin'ny haizina ato, ary tsy misy mpitsabo eto; tarehimarika daholo izahay rehetra. “Angamba maneno toy ny fanenoko ihany izy??” Mandà ny fisiany ny valiny rehetra. Angamba nentin-dry zareo ho any amin'ireo efitrano lehibe izy. Angamba nentin-dry zareo nalaina am-bavany avy hatrany izy. Nanome toky ahy ny mpanao fanadihadiana fa hamotsotra ny raiko raha toa aho ka mijanona. Mpandainga. Faniriako ny hahita kalo hampitahorana sy hampitsoahana ireo goaika ireo tsy hifaly hihinana ny tampon-dohako.
Reko avy any lavitra any ny hiakiaka Allahu Akbar . Efa ho tamin'ny 10 ora alina, fotoana fiaingàn'ireo hika isanandro. Mivoha ny varavarana. Mbola resy lahatra hatrany aho fa tsy maintsy ny varavaran'ny fitsaràna farany io mandra-pahitako jiro mavo avy any an-dalantsara nitondra ho anay ny Raad mahatsiravina.
“Mivoaha hohadihadiana”. Hitako ankehitriny ny zava-miafina: mba hiarovana ny filaminam-pirenena manoloana anay sy hanakànana anay tsy hamoaka ilay mpamadika sy mpampihorohoro miotrika ao anatinay ao, dia tenim-paritra Alawite no ifampiresahan-dry zareo, ny karatra ara-poko fampiasany sy ny zoro fijereny ny fiainana. Tsy trano io, tsy firenena, fa zava-manelingelina iray antsoin'izy ireo hoe fiaraha-miaina mba hamadihana ho mahery fo ireo mpanao heloka bevava avy amin'ny foko misy azy ireo.
Miditra ny efitrano fakàna am-bavany aho mba hitady an'i Abu Imad miaraka amin'ilay vatany tahon-kifafa kely iny, ho ahy aloha dia izay. Manomboka ny resany “amim-pirahalahiana” izy na eo aza ny fomba ivelany asehon'ny endriny tsy azony afenina : “Ry zanakolahy, mbola tanora ianao, afaka manao zavatra betsaka eo amin'ny fiainanao, zavatra manandanja kokoa noho ny mivenjivenjy miaraka amin'ireo tsy misy atao mivoaka manao hetsi-panoherana izay ho faty tsy ho ela”. Notazoniko ny fahanginako. Notadidiako toy ny tsianjery io. Tsy tena tsaroako tsara ny he fotoana toy ny inona no lasa fomba fanao mety ho fifandraisana ny fahazoanao resaka amim-pirahalahiana arahana ompa sy daroka. Tsy noraharahiako firy ny hoe oviana sy tamin'ny fomba ahoana. Nisy zavatra tao anatiko tao niteny tamiko mba ho zatra mandray sazy na dia tsy nanao na inona na inona aza ho entina manamarina an'izany. Ho zatra mandray ireo karazana fanasaziana amin'ny endriny rehetra.
Baiko azony ny hanongotra nofo betsaka araka izay vitany avy amiko. Tiany ny miantso azy ireny hoe “fiaikena heloka”. Atombony aminà fantsona plastika iray, angamba fampiasa amin'ny famoahana rano maloto. Tian'ilay mpampahory anao ny mandre anao mikiakiaka. Omeo azy io hafaliana io, tsinontsnona ianao, ary tsy mety tazonina ny kiakiakao. Tsy dia ampy nahafaly azy loatra ny kiakiakako, ka dia nosoloiny tariby ilay fantsona. Nandritry ny fihazonana voalohany ahy, nanontany tena aho raha nahazatra ireo mpanadihady ny niasa tany amin'ny fanangonana fako na efa fitaovana tonga miaraka amin'ilay asa io. Tariby iray matevina be vita taminà tariby efatra narandrana mba hananantsika io fahaizamamorona gavana io, eo imason'izy ireo.
Ora izay monja izay no nifandimbiasan'ny telo tamin'izy ireo, raha izaho kosa nipetraka tsy nihetsika tamin'ny toerako teo ihany. Nanomboka torovana ny vatako ka tsy afaka nikiaka intsony aho. Tsapany ilay fangatsiahana ary tsy tiany ilay izy, ka dia nopehany taminà herinaratra aho. Nandalo ny vatako ny herinaratra. Herinaratra ampy hamatsiana ny mpiray vodirindrina amiko manontolo no nandalo ny vatako. Ny vatako nitafy tapaka nitsirara eo amin'ny gorodona dia tena mpampita herinaratra tsara mihitsy. Nanjavona ny fahatorovanana ary niverina tsapa ny fanaintainana. Ora roa nahatsiravina taorian'ny nanapahany hevira hampitsahatra azy nony alina. Tokony ho misasakalina teo izay, raha ny fiheverako azy. Nanapaka hevitra aho ny handeha hiverina hatory, na aleo lazaintsika hoe izay no hany safidy azoko noraisina.
Ora vitsy no lasa, ho ahy minitra no nahatsapan'izy ireo izany. Ny antso ho an'ny vavaka maraina. Misokatra ny varavarana ary miditra ny tara-pahazavan'ny andro farany. “Mivoaha, ry ilay fatritrany ity a”. Mamaly amin'ny feoko tanora reraka aho : “Ramose, mety marary miasa saina izay ny raiko”. “Akombony ny vava dia ndao, afindra ialahy.” Sambany io. Tamin'ireo fotoana tany aloha dia fanafahana avy any am-ponja. Aiza no hitondran'izy ireo ahy?!